Roy Keane Oo Ka Hadlay Dhacadadii Muranka Keentay Ee Alexander-Arnold Iyo Cadho Uu Ka Muujiyay Arintan. - Gool24.Net
Roy Keane Oo Ka Hadlay Dhacadadii Muranka Keentay Ee Alexander-Arnold Iyo Cadho Uu Ka Muujiyay Arintan.
Khabiirka Sky Sports ahna halayaygii hore ee Manchester United ee Roy Keane ayaa ka hadlay murankii ka dhashay gacantii uu Arnold kubbada ku taabtay ee aan kooxda City rekoodhaha lagu abaal marin.
Roy Keane oo lagu yaqaano hal adayg iyo canaan badan ayaa ku dooday in dhacdadii Arnold ay noqotay mid aan u qalmin in laga hadlo marka la qiimeeyo kulanka cajiibka ahaa ee ay labada kooxood qaateen wuuxuna Roy Keane difaacay Liverpool.
Roy Keane ayaa ku dooday in Liverpool ayna wax qalad ah ku lahayn hadii ay rekoodhe noqon lahayd iyo haddii kaleba dhacdadii Arnold wuxuuna eeda saaray VAR iyo garsooraha.
Laakiin Roy Keane oo la ogyahay sida uu Liverpool u neceb yahay ayaa haddana qarsan kari waayay qaabkii ay kooxda Jurgen Klopp u garaacday Manchester City.
Roy Keane oo Sky Sports ka hadlayay ayaa si gaar ah uga hadlay goolkii Fabinho iyo saamayntii uu ciyaarta ku yeeshay xili lagu mashquulsanaa in Alexander-Arnold uu kubbada cagta ku celiyay.
Roy Keane oo muhiimada goolkii Fabinho iyo murankii ka horeeyay ka hadlaya ayaa yidhi: “Waa waqti wayn, laakiin ma aha dhibaatada Liverpool ee haddii uu garsooraha ama VAR eegi lahaa”.
Roy Keane oo cadho ka muujinaya in qaladaadka garsoorka Premier League ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in ay qayb laga cadhoodo tahay in dhamaanteen oo kubbada cagta waqti dheer ku soo lug lahaa aynu ugu dhawaan dhadadan oo kale todobaadka soo socda ku arki doono iyada oo rekoodhe lagu bixinayo.
Laakiin Roy Keane ayaa Liverpool ka difaacay in ayna iyagu wax qalad ah samayn isla markaana ayna Reds wax walwal ah qabin wuxuuna yidhi: “Laakiin xaqiiqdii ma aha dhibaatada Liverpool kana walwalayso. Goolku taas ayuu ka yimid, laakiin wali garoonka oo dhan ayay ku sii safrayeen”.
Ugu danbayn Roy Keane ayaa markale cadho ka muujiyay in hal dhacdo oo kaliya lagu qariyay kulan xiiso badnaa wuxuuna yidhi: “Waa wax cadho leh in aynu ka hadlayno wax ku saabsan go’aan kaas intii aynu ka hadli lahayn kulan cajiib ah oo kubbada cagta ah”.